Etu ndi enyi si kuziere ụwa ịsụ bekee – site na Jürgen Klopp ruo ndị megastars nke Korea | 1xbet
Ndị enyi bụ n’ezie, onye nkuzi Bekee a na-asọpụrụ oge. Ma Luis Severino nke ndị otu egwuregwu bọọlụ New York Yankees, nke si Dominican Republic, yana onye Venezuela Wilmer Flores, onye bụbu onye iro Mets, ekwuola maka ịmụ asụsụ ngụkọta site na ngosi ahụ. (Flores, onye kwuru na ya na-ele Ndị Enyi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, ọbụnadị gbanwere egwu ọ na-aga ije na isiokwu nke Rembrandts.) / Rex / Shutterstock
Rap Monster, AKA RM, onye otu Korea Bband, kwuru na ndị nne na South Korea na-ejikarị enyi eme ka ụmụ ha nwee mmasị na bekee, “ọbụlagodi mgbe ha na-eri nri. nri ma ọ bụ igwu egwu ”.Ọ na-eme atụmatụ na ya lere oge 10 niile anya ọ dịkarịa ala ugboro ise, na-amụ ọ bụghị naanị asụsụ nkedo, kamakwa mmegharị na ngosipụta ha, iji mara otu esi ekwupụta mmetụta nke America. O kwubiri, si: “Chukwu gozie Ndi Enyi!”
Onye nkuzi asusu obula ga agwa gi na ikpughe ya n’udi di iche-iche nwere ike ime ka okwu were were; Klopp kwuru na ọ gbakwunye oge ya na Central Perk na redio na asụsụ Bekee. Nnyocha 2015 nke onye nkwusa mmụta bụ Pearson English chọpụtara na, nke ndị na-amụ asụsụ Bekee nyochara, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% jiri ihe nkiri na ihe ngosi TV iji meziwanye nkà ha, na 24% na-ekwu banyere ihe nkiri ndọrọ ndọrọ ọchịchị Netflix House of Cards dị ka usoro nke nyeere ha aka. Ihe na-esote bụ Breaking Bad (24%) na Downton Abbey (19%).Onye nkuzi Basque nke Arsenal Unai Emery na-ahọrọ Peaky Blinders: “Ọ dị mma, mana ọ siri ike [ịghọta ndị mmadụ] si Birmingham. Ma ọ na-eme ihe ike. Ma ọ dị mma, “ọ na-ekwu. Facebook Twitter Pinterest
Mana ntuli aka emere na 2012 nke onye isi ụlọ akwụkwọ Bekee, Kaplan International English, kpughere Enyi ka ọ bụrụ ihe ngosi kachasị ewu ewu na ndị na-amụ Bekee, na-atụ aka na njikọ mba ụwa, catchphrases na “ihe ọchị na-erigbu ”.Jeff Astrof, onye editọ akụkọ banyere ndị enyi, onye dekwara ọtụtụ akụkọ, kwuru na ihe ijuanya ahụ atụghị ya n’anya: “Na New York, enwere m onye ọkwọ ụgbọ ala nke ndị Middle East na-asị: ‘Enwere ndị ahịa ọzọ ga-abịa? ‘na asụsụ Chandler ya kachasị mma. ”
Nchọpụta ahụ chọpụtakwara na ndị sị na Ndị Enyi nyere ha aka ịmụ asụsụ bekee yikarịrị ka ha ga-aga US iji mụọ asụsụ ahụ. YouTube juputara na vidiyo nkuzi dika “Muta ndi Bekee na ndi enyi”. Ulo akwukwo mmụta nke Vietnamese eJOY toro ihe ngosi a “otutu ihe ngosi nke ndu ubochi kwa ubochi” na ihe omuma ya: Rachel, “nwa nke onye ọchụnta ego”; Joey, “onye na-eme ihe nkiri nwere olu na-adọrọ adọrọ”; “Nwa okorobịa 9-ruo-5” Chandler; Monica, “ihe na-adọrọ adọrọ”; “Onye na-abụ abụ ihe omimi” Phoebe; na Ross.Facebook Twitter Pinterest
companylọ ọrụ ahụ na-atụ aro na ndị na-amụ ihe “na-ekwu okwu dị ka agwa kachasị amasị gị”, ma kwuo akụkụ ụfọdụ akọwapụtara nke ga-esi mụta otu esi eji “ọmarịcha izute gị” (Onye Na-anụ Chandler’s Work Laugh); “Nwee echiche nke abụọ” (Otu ebe Ross na Rachel na-ezumike), ma “pụọ” (Onye nwere Kiss na-ezighi ezi Rachel). Ihe nchoputa nke ndi amuru bekee dika odi ka ha anọdụ ala na nkparịta ụka nke oge a banyere sitcom bụ nwoke na nwanyị, homophobic ma ọ bụ nsogbu ọzọ – mana ọ dịkarịa ala Klopp yiri ka ọ maara adịghị ike ndị edemede ahụ.
BBC jụrụ ya nke n’ime mmadụ atọ ahụ nwoke na-eduga ndị Enyi ọ kacha mara, Klopp kwuru, sị: “Ee e. Mba, mba, mba. Mba mba mba. ” Mgbe ọ kwusịrị ogologo oge, ọ sịrị: “Enwere m mmasị karịa ụmụ agbọghọ karịa ụmụ nwoke,” ọ chịkwara ọchị ọchị.O kpebiri na ọ dị ntakịrị “amamihe karịa Joey” – mana mkparịta ụka mụ na ụmụ agbọghọ anaghị adị ka nke ya “. Mgbe ahụ Klopp kwukwara, dị ka a ga-agụgharị ya nke ọma, na ụda olu German dị arọ ya: “Olee otu ị si eme ‘?”